ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?? - Software Guide
Home / Facebook ဆိုင်​ရာ / TECH / ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ??
Facebook ဆိုင်​ရာ, TECH
ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းအသုံးပြုနေရတဲ့ Facebook အကောင့်သာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခိုးယူခြင်းကို ခံလိုက်ရတဲ့အခါ တော်တော်များများက ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အကယ်လို့များ သင်အမြတ်တနိုးထားရတဲ့ Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ အချိန်မီပြန်ယူနိုင်ပြီး ၊ ကိုယ့်အကောင့်လုံခြုံရေးကို တော်ရုံလူတွေဟက်မရအောင် ခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ထားနိုင်မယ့် Tips နဲ့ Tricks တွေကို အခရာပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ့်အကောင့်ကို သူများဟက်သွားကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
သင့်အနေနဲ့ သင့် Facebook အကောင့်ထဲမှာ မူမမှန်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ တွေ့လာရတဲ့အခါ ၊ သင့်အနေနဲ့ Facebook ရဲ့ Setting ထဲကို သွားပြီး ဘယ်သူ ကိုယ့်အကောင့်ထဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကို သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့် Facebook ထဲက နာမည် ၊ မွေးနေ့ ၊ Email နဲ့ Password တွေကို ပြောင်းသွားတာမျိုးတွေ ၊ ကိုယ်မသိတဲ့ Friend တွေကို Request နဲ့ Message တွေ လျှောက်ပို့တာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်တော့ စိုးရိမ်ရေမှတ်ကို ရောက်နေပါပြီ။
ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ Facebook ရဲ့ Setting ထဲက Security>>Where You’re Logged In စာမျက်နှာကို သွားရောက်ပြီး ကိုယ့်အကောင့်ကို အချိန်နဲ့ နေရာ အတိအကျနဲ့ ဘယ် Device ကနေ ဝင်သုံးသွားတယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့သော ဟက်ကာတွေကတော့ VPN ကျော်ပြီး Location ကို လိမ်ထားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ Acitivities တွေကို End Activity ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ Android ဖုန်းမှာတော့ အမှားလက္ခဏာ (Remove Button) လေးကို နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ရပါတယ်။ အဲ့လိုပြုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်တော့ ကိုယ့်အကောင့်ထဲဝင်ထားတဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကတော့ အကောင့်ထဲကနေ ခဏ Logged Out ဖြစ်သွားမှာပါ။
Facebook ကို အကူအညီတောင်းမယ်
အပေါ်က အဆင့်တွေကို ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်အကောင့်သူများလက်ထဲပါမသွားဖို့အတွက် Facebook ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အကောင့်ကို ပြန်ဆယ်ရပါမယ်။
Facebook ရဲ့ Help Page ကို သွားရောက်ပါ။ ပြီးတော့ I think my account was hacked or someone is using it without my permission ဆိုတဲ့ အကူအညီတောင်းခံချက်ကို လိုက်ရှာပြီး ကလစ်လုပ်ပါ။ တိုက်ရိုက်လင့်ခ်အနေနဲ့ကတော့ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး သွားရောက်လို့ရပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ အဲ့ထဲက Secure Your Account ကို နှိပ်ပြီး Facebook နဲ့အတူ အဟက်ခံနေရတဲ့ အကောင့်ကို လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြန်လည်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အကောင့်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို အဆင့်ပြန်မြှင့်မယ်
အပေါ်က အဆင့်တွေပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ကိုယ့်အကောင့်ကို ပြန်လည်ရရှိနေပါပြီ။ အဲ့အခါကျရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က အကောင့်လုံခြုံရေးကို ထပ်မဖောက်လာနိုင်တော့အောင် လုံခြုံရေး အဆင့်မြှင့်တင်မှုလုပ်ပါမယ်။ Facebook ကတော့ အကောင့်လုံခြုံရေးတွေအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သေချာထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ Account Setting >> Security ထဲမှာ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ အဲ့လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို ကျွန်တော်နဲ့အတူ တစ်ချက်လောက်လိုက်သုံးကြည့်ပြီး အကောင့်လုံခြုံရေးကို တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ ဖောက်မရအောင် ကာကွယ်လိုက်ရအောင်..
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Account Setting ထဲက Security ထဲကို သွားပြီး Login Alert ကို ဖွင့်ပါမယ်။ Alert ကိုတော့ Notification နဲ့ရော ၊ Email နဲ့ပါယူလို့ရပါတယ်။ Alert ဖွင့်ထားခြင်းအားဖြင့် သင်မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက် တစ်ခြား Browser တွေ ၊ Device တွေကနေ ဝင်လာတဲ့အခါ သင့်ကို စောလျင်စွာ သိရှိစေမှာပါ။
ပြီးရင်တော့ Login Alert အောက်က Login Approvals ကို ဖွင့်ပေးရမှာပါ။ Login Approval ကို ဖွင့်ထားခြင်းအားဖြင့် သင့်အကောင့်ကို နေရာသစ်တစ်ခုကနေတစ်ခါဝင်တိုင်း Code တောင်းမှာပါ။ Code ကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Email နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ခံရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ App Passwords ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့် Facebook အကောင့်ရဲ့ Password ကို ကာကွယ်ထားမှာပါ။ App Passwords ဆိုတာကတော့ Facebook မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားသော Third-Party Apps တွေကို ဝင်တဲ့အခါမှာ Facebook ကနေ Auto-Generate ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Password တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ Skype လိုမျိုး အပြင် App တစ်ခုကို FB နဲ့ Log-In ဝင်တဲ့အခါ ဒီ App Passwords နဲ့ ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ App Password မှာတော့ ကိုယ့် Facebook ရဲ့ Password နဲ့ မဝင်လိုတဲ့ App နာမည်ကို ထည့်ထားရုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် စိတ်အချရဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ Trusted Contacts တွေကို ထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ချို့နဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို Trusted Contact ထဲကို ထည့်ထားခြင်းအားဖြင့် သင့်အကောင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ သူတို့ဆီကနေ အကူအညီပြန်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို Log In ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အတွက် Trusted Contact ထဲက လူတွေဆီကို Facebook က Security Code အသီးသီး ပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ထဲက သုံးခုကိုသင်က သိသွားရုံနဲ့ ကိုယ့်အကောင့်ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အချက်လေးတွေအနေနဲ့တော့ ကိုယ် Approval ခံထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Email တွေကို Only Me ပြုလုပ်ထားပြီး ဘယ်သူမှမသိအောင် လုပ်ထားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်သလို ကိုယ့်အကောင့်အတွက် ID တင်ထားတာကလည်း အကောင့်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတိုင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဟက်ကာက ကိုယ့်အကောင့်တစ်ခုလုံးကို စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်ခွင့်ရသွားရင်တောင် Account ID နဲ့ Lock ချထားနိုင်တာကြောင့် Account ID ကလည်း မဖြစ်မနေတင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အခရာပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ လုံခြုံရေးပြဿနာလေးတွေကြုံလာရတဲ့အခါ ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာပြီး ကိုယ့်အကောင့်ကို Secure ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref : CNet, Digital Trends, Facebook Help
ကိုယျ့ Facebook အကောငျ့ အဟကျခံရတဲ့အခါ ဘာတှလေုပျရမလဲ??
ကြှနျတျောတို့ နတေို့ငျးအသုံးပွုနရေတဲ့ Facebook အကောငျ့သာ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ ခိုးယူခွငျးကို ခံလိုကျရတဲ့အခါ တျောတျောမြားမြားက ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိဖွဈတတျကွပါတယျ။ အကယျလို့မြား သငျအမွတျတနိုးထားရတဲ့ Facebook အကောငျ့ အဟကျခံရတဲ့အခါ အခြိနျမီပွနျယူနိုငျပွီး ၊ ကိုယျ့အကောငျ့လုံခွုံရေးကို တျောရုံလူတှဟေကျမရအောငျ ခိုငျခိုငျမာမာတညျဆောကျထားနိုငျမယျ့ Tips နဲ့ Tricks တှကေို အခရာပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
ကိုယျ့အကောငျ့ကို သူမြားဟကျသှားကွောငျး ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ
သငျ့အနနေဲ့ သငျ့ Facebook အကောငျ့ထဲမှာ မူမမှနျတဲ့ ပုံစံမြိုးတှေ တှလေ့ာရတဲ့အခါ ၊ သငျ့အနနေဲ့ Facebook ရဲ့ Setting ထဲကို သှားပွီး ဘယျသူ ကိုယျ့အကောငျ့ထဲဝငျနတေယျဆိုတာကို သှားကွညျ့လို့ရပါတယျ။ ကိုယျ့ Facebook ထဲက နာမညျ ၊ မှေးနေ့ ၊ Email နဲ့ Password တှကေို ပွောငျးသှားတာမြိုးတှေ ၊ ကိုယျမသိတဲ့ Friend တှကေို Request နဲ့ Message တှေ လြှောကျပို့တာမြိုးတှဖွေဈလာရငျတော့ စိုးရိမျရမှေတျကို ရောကျနပေါပွီ။
ဒီလိုဖွဈလာတဲ့အခါ သငျ့အနနေဲ့ Facebook ရဲ့ Setting ထဲက Security>>Where You’re Logged In စာမကျြနှာကို သှားရောကျပွီး ကိုယျ့အကောငျ့ကို အခြိနျနဲ့ နရော အတိအကနြဲ့ ဘယျ Device ကနေ ဝငျသုံးသှားတယျဆိုတာကို အသေးစိတျကွညျ့ရှုနိုငျပါလိမျ့မယျ။ တဈခြို့သော ဟကျကာတှကေတော့ VPN ကြျောပွီး Location ကို လိမျထားတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီထဲကမှ ကိုယျမဟုတျတဲ့ Acitivities တှကေို End Activity ပွုလုပျလိုကျပါ။ Android ဖုနျးမှာတော့ အမှားလက်ခဏာ (Remove Button) လေးကို နှိပျလိုကျရုံနဲ့ ရပါတယျ။ အဲ့လိုပွုလုပျလိုကျခွငျးအားဖွငျ့တော့ ကိုယျ့အကောငျ့ထဲဝငျထားတဲ့ တဈခွားတဈယောကျကတော့ အကောငျ့ထဲကနေ ခဏ Logged Out ဖွဈသှားမှာပါ။
Facebook ကို အကူအညီတောငျးမယျ
အပျေါက အဆငျ့တှကေို ပွုလုပျပွီးတဲ့အခါမှာတော့ သငျ့အနနေဲ့ ကိုယျ့အကောငျ့သူမြားလကျထဲပါမသှားဖို့အတှကျ Facebook ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အကောငျ့ကို ပွနျဆယျရပါမယျ။
Facebook ရဲ့ Help Page ကို သှားရောကျပါ။ ပွီးတော့ I think my account was hacked or someone is using it without my permission ဆိုတဲ့ အကူအညီတောငျးခံခကျြကို လိုကျရှာပွီး ကလဈလုပျပါ။ တိုကျရိုကျလငျ့ချအနနေဲ့ကတော့ ဒီနရောကိုနှိပျပွီး သှားရောကျလို့ရပါတယျ။
ပွီးရငျတော့ အဲ့ထဲက Secure Your Account ကို နှိပျပွီး Facebook နဲ့အတူ အဟကျခံနရေတဲ့ အကောငျ့ကို လှယျကူတဲ့နညျးလမျးတှနေဲ့ ပွနျလညျကာကှယျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့အကောငျ့ရဲ့ လုံခွုံရေးကို အဆငျ့ပွနျမွှငျ့မယျ
အပျေါက အဆငျ့တှပွေုလုပျပွီးရငျတော့ ကိုယျ့လကျထဲမှာ ကိုယျ့အကောငျ့ကို ပွနျလညျရရှိနပေါပွီ။ အဲ့အခါကရြငျတော့ ကိုယျ့ဘကျက အကောငျ့လုံခွုံရေးကို ထပျမဖောကျလာနိုငျတော့အောငျ လုံခွုံရေး အဆငျ့မွှငျ့တငျမှုလုပျပါမယျ။ Facebook ကတော့ အကောငျ့လုံခွုံရေးတှအေတှကျ လုပျဆောငျခကျြတှကေို သခြောထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒီလုပျဆောငျခကျြတှကေိုတော့ Account Setting >> Security ထဲမှာ ရှာကွညျ့လို့ရပါတယျ။ အဲ့လုပျဆောငျခကျြလေးတှကေို ကြှနျတျောနဲ့အတူ တဈခကျြလောကျလိုကျသုံးကွညျ့ပွီး အကောငျ့လုံခွုံရေးကို တျောရုံတနျရုံနဲ့ ဖောကျမရအောငျ ကာကှယျလိုကျရအောငျ..
ပထမဆုံးအနနေဲ့ Account Setting ထဲက Security ထဲကို သှားပွီး Login Alert ကို ဖှငျ့ပါမယျ။ Alert ကိုတော့ Notification နဲ့ရော ၊ Email နဲ့ပါယူလို့ရပါတယျ။ Alert ဖှငျ့ထားခွငျးအားဖွငျ့ သငျမဟုတျတဲ့ တဈခွားတဈယောကျ တဈခွား Browser တှေ ၊ Device တှကေနေ ဝငျလာတဲ့အခါ သငျ့ကို စောလငျြစှာ သိရှိစမှောပါ။
ပွီးရငျတော့ Login Alert အောကျက Login Approvals ကို ဖှငျ့ပေးရမှာပါ။ Login Approval ကို ဖှငျ့ထားခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့အကောငျ့ကို နရောသဈတဈခုကနတေဈခါဝငျတိုငျး Code တောငျးမှာပါ။ Code ကိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ဖုနျးနံပါတျနဲ့ ဖွဈဖွဈ Email နဲ့ပဲဖွဈဖွဈ လကျခံရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
နောကျတဈခကျြကတော့ App Passwords ကို အသုံးပွုပွီး ကိုယျ့ Facebook အကောငျ့ရဲ့ Password ကို ကာကှယျထားမှာပါ။ App Passwords ဆိုတာကတော့ Facebook မဟုတျတဲ့ တဈခွားသော Third-Party Apps တှကေို ဝငျတဲ့အခါမှာ Facebook ကနေ Auto-Generate ပွုလုပျပေးတဲ့ Password တှဖွေဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ Skype လိုမြိုး အပွငျ App တဈခုကို FB နဲ့ Log-In ဝငျတဲ့အခါ ဒီ App Passwords နဲ့ ဝငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ App Password မှာတော့ ကိုယျ့ Facebook ရဲ့ Password နဲ့ မဝငျလိုတဲ့ App နာမညျကို ထညျ့ထားရုံနဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
နောကျထပျ စိတျအခရြဆုံးလုပျဆောငျခကျြကတော့ Trusted Contacts တှကေို ထညျ့ထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးတဈခြို့နဲ့ မိသားစုဝငျတှကေို Trusted Contact ထဲကို ထညျ့ထားခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့အကောငျ့ကို တဈစုံတဈယောကျက ခိုးယူဖို့ ကွိုးစားတဲ့အခါ သူတို့ဆီကနေ အကူအညီပွနျရနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့အကောငျ့ထဲကို Log In ပွနျလညျဝငျရောကျဖို့အတှကျ Trusted Contact ထဲက လူတှဆေီကို Facebook က Security Code အသီးသီး ပို့ပေးသှားမှာဖွဈပွီး အဲ့ထဲက သုံးခုကိုသငျက သိသှားရုံနဲ့ ကိုယျ့အကောငျ့ကို ပွနျလညျထိနျးခြုပျသှားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျ အခကျြလေးတှအေနနေဲ့တော့ ကိုယျ Approval ခံထားတဲ့ ဖုနျးနံပါတျနဲ့ Email တှကေို Only Me ပွုလုပျထားပွီး ဘယျသူမှမသိအောငျ လုပျထားတာက အကောငျးဆုံးဖွဈသလို ကိုယျ့အကောငျ့အတှကျ ID တငျထားတာကလညျး အကောငျ့မှာ ပျေါပေါကျလာတဲ့ပွဿနာတိုငျးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဟကျကာက ကိုယျ့အကောငျ့တဈခုလုံးကို စိတျကွိုကျခွယျလှယျခှငျ့ရသှားရငျတောငျ Account ID နဲ့ Lock ခထြားနိုငျတာကွောငျ့ Account ID ကလညျး မဖွဈမနတေငျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ အခရာပရိသတျတှအေနနေဲ့လညျး အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ Facebook အကောငျ့မှာ လုံခွုံရေးပွဿနာလေးတှကွေုံလာရတဲ့အခါ ဒီအခကျြလေးတှကေို လိုကျနာပွီး ကိုယျ့အကောငျ့ကို Secure ဖွဈအောငျ ပွုလုပျလို့ရနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။